विज्ञ भन्छन्- संक्रमण घटेजस्तो लागे पनि जोखिम कायमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
विज्ञ भन्छन्- संक्रमण घटेजस्तो लागे पनि जोखिम कायमै
जेष्ठ ३०, २०७८ बुनु थारु
काठमाडौँ — सरकारले जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने मोडालिटी तयार पारिरहँदा कोरोना परीक्षण ह्वात्तै घटेको छ । जसका कारण परीक्षण दर घट्नुका साथै सक्रिय संक्रमितको ग्राफ पनि कम देखिएको छ । तर ग्राफकै आधारमा कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य बन्दै गएको भन्न नमिल्ने विज्ञ चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले मंगलबार टुँडिखेल परिसरमा एन्टिजेन परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्दै । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर
जेठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा ७ गते सबैभन्दा धेरै २२ हजार ३५३ पीसीआर परीक्षण भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तथ्यांक केलाउँदा परीक्षण संख्या निरन्तर ओरालो लागेको छ । जेठ १ गते १० हजार ४७१ पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा २९ गते (शनिबार) यो संख्या घटेर ८ हजार ५०६ मा सीमित भएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा संक्रमण कम देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा विस्तार नहुँदा र कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगसमेत नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थाउस्तै रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोेजक डा. शेरबहादुर पुनले परीक्षण पहिलेभन्दा कम भएको मानिए पनि यकिनका साथ घटेको भन्न नसकिने बताए । ‘पहिलेझैं अझै पनि बिरामी भए वा परिवारका सदस्य बिरामी भए मात्र परीक्षणका लागि आउने गर्छन् । पहिलेभन्दा साँच्चिकै तीव्र गतिमा सायद संक्रमण नदेखिएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण घटेजस्तो लागे पनि जोखिम भने कायमै छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएकाले संक्रमितको संख्या त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ । ‘धेरै जना संक्रमित भइसकेर निको पनि भइसके होला त्यसैले पनि परीक्षण नगराएका होलान्,’ उनले भने ।
डा. पुन हालको अवस्था हेर्दा संक्रमण अझै बढ्न सक्ने सम्भावना कम देखिरहेको बताउँछन् । आगामी हप्ता दिनमा संक्रमण अपेक्षाकृत घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘गाउँको अवस्था भन्न सकिन्न तर सहरी क्षेत्रमा भने आगामी हप्ता कम हुनुपर्छ । जति संक्रमित हुनुपर्ने थिए, ती सबै भइसकेका छन् जस्तो लाग्छ । किनकी अहिले मानिसबीच भेटघाट छैन ।’
पहिलो लहरमा पनि केही हप्तासम्म संक्रमणको लहर उक्लिदा पछि ओरालो लागेको थियो । आगामी दिनमा यो भन्दा पनि खराब भेरिएन्ट आयो भने, बेलैमा खोप नपाउने हो भने वा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने अर्को लहर नआउला भन्न नसकिने उनले बताए ।
भाइरोलोजिस्ट डा. लुुना भट्ट निषेधज्ञाले मानिसहरु परीक्षण गराउन नगएकाले परीक्षण कम भएको हुन सक्ने बताउँछिन् । मानिसहरुलाई परीक्षण गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘साँच्चिकै संक्रमण घटेको हो भने किन भनेर सरकारले खुलाउनुपर्‍यो । जबर्जस्ती संक्रमण दर घट्यो भनेर लुकाउन भएन,’ उनले भने ।
हाल धेरैले खोपको पूरा डोज लगाइसकेका छैनन् । झन् त्यसले जोखिम बढाइरहेको हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन् । ‘अहिले डेल्टा भेरिएन्टको भाइरस एकदमै संक्रामक मानिएको छ । हाम्रोमा पनि भित्र–भित्रै म्युटेसन भइरहेको होला । भाइरसले आफूलाई फाइदा हुने हिसाबमा म्युटेसन गर्न सक्छ । यसले त झन् महामारी सिद्धिने होइन झन् बढ्न सक्छ,’ डा. भट्टले भनिन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि तेस्रो लहरसँग जुध्न पूर्वतयारीका लागि विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्न उनले सुझाव दिइन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले परीक्षण घट्नुमा विभिन्न कारण रहेको बताउँछन् । ‘धेरैजना सामान्य लक्षण भएर परीक्षणमा गएका छैनन् । अर्को, अझै पनि परीक्षण गर्न जाने कुरामा हिच्किचाहट छ,’ उनले भने, ‘पीसीआर मात्रै घट्नुमा एन्टिजेन परीक्षण गाउँगाउँमा पुग्नु पनि हो ।’
तथ्यांक हेर्दा संख्यात्मक हिसाबले धेरै कम भए पनि नियन्त्रणमा आइनहालेको र जोखिमकै अवस्था रहेको उनले बताए । ‘टेस्ट पोजिटिभिटीमा ठाउँ अनुसार भेरिएसन छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतमा यो दर घट्दो छ,’ उनी भन्छन्, ‘समुदायमा जहाँ आउटबे्रक भएको छ, एन्टिजेन टेस्ट गर्दा अझै पनि उच्च पोजिटिभ छन् । तर अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा संक्रमणको दोस्रो लहर केही घट्दै छ कि भन्ने देखाइरहेको छ ।’
परीक्षणको संख्या अनुसार संक्रमित देखिने दर (पर्सेन्ट पोजिटिभ रेट, पीपीआर) ५ प्रतिशत भन्दा तल नगएसम्म निषेधाज्ञाका धेरै प्रावधान खुलाइहाल्न नहुने उनले बताए । हाल नेपालको पीपीआर २८ प्रतिशत रहेको छ । उक्त संख्यालाई ५ प्रतिशतमा पुर्‍याउनलाई अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिलेको हालतमा धेरै क्षेत्र खोलिहाल्ने अवस्थामा छैनौं । आइसियु र संक्रमित राख्ने वार्डको अवस्था, टेस्ट पोजिटिभिटी र अर्को र्‍यान्डम टेस्ट गर्दा कति संक्रमित पत्ता लागे त्यो पनि हामी हेर्छौँ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकलाई हेरेर ठाउँको जोखिम हेर्दै निषेधाज्ञा बारे सीसीएमसीले निर्णय गर्नेछ ।’
जेठ पीसीआर संक्रमित पीपीआर
१०,४७१ ३,०२४ २८.८७
२४ १२,००२ ३,३७० २८.०७
२५ १२,०६५ ३,८७० ३२.०७
२६ १२,०४७ ३,४४९ २८.६२
२७ ९,९०१ २,८७४ २९.०२
२८ ९,५९८ २,७०९ २८.२२
२९ ८,५०६ २,३८२ २८.००
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १५:५८
उपत्यकामा सामान्य वार्डमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या घट्यो, आईसीयूमा चाप उस्तै
बाहिरी जिल्लाबाट रिफर भएर आउने संक्रमित बढे
जेष्ठ २७, २०७८ बुनु थारु
काठमाडौँ — उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि अस्पतालमा पनि चाप कम हुँदै गएको छ । कुनैबेला बेड अभावमा अस्पताल परिसरमै बिरामी राखेर उपचार गर्न बाध्य अस्पतालहरुको अवस्था अहिले फरक भएको छ ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले १ हप्ता यता कोभिड बिरामीको संख्या कम हुँदै गएको बताए । ‘बिरामीको संख्या केही घटेको भने हो,’ उनले भने, ‘आँगनमा राखेर उपचार गर्ने बाध्यता कम भएको छ । यसका साथै पीसीआर गराउन आउनेको संख्यामा पनि उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको छ । हाललाई बेड पुगेको छ ।’
डा. राजभण्डारीका अनुसार सामान्य वार्डमा बसेर उपचार गराउने बिरामीकोे संख्यामा कमी आएपनि आईसीयु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गराउनेको चाप उस्तै रहेको छ । ‘अहिले पनि हामीकहाँ आईसीयू फूल नै छ । बाहिरी जिल्लाबाट रिफर भएर आउने सिकिस्त बिरामी भने बढेका छन्,’ डा. राजभण्डारीले भने ।
उनका अनुसार हाल अस्पतालमा काठमाडौं उपत्यकाका बिरामीहरु कमै मात्र आएका छन् । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको दर घटेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ संक्रमण नियन्त्रण भएको देखिन्छ । उपत्यका बाहिरका समुदायमा संक्रमण बढिसक्यो । त्यसैले उताबाट धेरै बिरामी रिफर भएर आएका छन् ।’
धादिङ, सर्लाही ,सिन्धुली, नवलपरासी, उदयपुर, रसुवा, खोटाङ, दाङ, काभे्र लगायतका स्थानहरुबाट गम्भिर प्रकृतिका बिरामीहरु भने आइरहेको डा. राजभण्डारीले बताए । उनले परीक्षण नै नगरी होमआइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरु पनि उपचारका लागि आएको बताउँदै गाउँमै आरडिटी गर्ने र सिकिस्त भएपछि उपचारका लागि काठमाडांै आउने गरेको दाबी गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको तथ्यांक अनुसार काठामाडौं उपत्याकामा विगत जेठ १३ गते यता संक्रमित हुनेको संख्या १९ हजार ९ सय ९७ रहेको छ । जबकी वैशाख २९ देखि जेठ १२ गतेसम्म मात्रै उपत्यकामा कुल ४२ हजार ३ सय ८ जना संक्रमित फेला परेको जानकारी साइटमा उपलब्ध छ । काठमाडौं उपत्यकासँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा पनि विगत केही समय यता संक्रमितको संख्या घटेको देखिएपनि परीक्षण निकै कम हुनुका साथै त्यहाँ समुदायमा नै संक्रमण फैलिएको अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुका फोकल पर्सन डा. प्रविन नेपालले पनि हालको अवस्था हेर्दा रामेछाप, रोल्पा, रुकुम, मकवानपुर, दोलखा लगायतका जिल्लाहरुबाट बिरामीहरु रिफर भएर आइरहेका छन् । ‘हामीले अहिलेसम्म उच्च संख्यामा राखेको बिरामीको संख्या २०० हो । १३० को हाराहारीमा बिरामी अहिले भर्ना रहेका छन्,’ उनले भने, ‘एक हप्ता यता बिरामीको संख्या कम हुँदै गएको छ ।’ उनले पहिलेको तुलनामा ननकोभिडका बिरामी पनि उपचारका लागि आउने संख्या बढिरहेको बताएपनि आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप रहेको बताए ।
वैशाख महिनामा नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उच्चतम विन्दुमा पुगेको समयमा २०० जनासम्म संक्रमित भर्ना गरेर उपचार गरेको वीर अस्पतालका फोकल पर्सन डा. अच्युत कार्की दाबी गरे । उनका अनुसार अहिले एक साता यता वीरमा औसतमा१२० जना बिरामीमात्रै भर्ना भएर उपचार सेवा लिइरहेका छन् । ‘समुदायमा अझै धेरै परीक्षण बढाएर लाने हो भने संख्यामा कमी आउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आईसीयू र एचडीयूमा बिरामीहरु नघटेपनि अक्सिजन चाहिने बिरामी भने घटेको छ ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फोकल पर्सन राम विक्रम अधिकारीले केही समय पहिला कोभिड इमरजेन्सीमा दैनिक ३० देखि ४० जनासम्म बिरामी आउँदा बाहिर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अहिले हटेको छ । ‘संक्रमा पिकमा पुगेको बेला जनरल बेडमापनि कोरोनाका बिरामी राखेर उपचार गरेका थियौँ । ४०० भन्दा बढी बिरामीहरु उपचार भएकोमा आजको तथ्यांक हेर्दा १६२ जना उपचाररत रहेका छन्,’ उनले भने, ‘आईसीयूमा भने बिरामी छन् ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा म्यूक्रो माइक्रोसिसका ६ जना उपचार गराएकोेमा एक जनाको मृत्यु समेत भएको छ ।
निजीमा पनि बिरामीको संख्या घट्दै
ठूलो सरकारी अस्पतालमा मात्रै नभएर कोभिड बिरामी उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरुमा पनि बिरामीको चाप कम हुँदै गएको छ । तर, निजी अस्पतालका सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीको संख्यामा भने कमि आएको छैन ।
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. राज रानाले विगत १५ दिनको तुलनामा अहिले आएर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बिरामीको संख्यामा कमी आएको बताए । ‘सिकिस्त बिरामीको संख्या आईसीयूमा उस्तै रहेपनि अरु सामान्य वार्डमा भर्ना हुने बिरामीमा कमी आएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जनकपुर, भैरहवा लगायत जिल्लाबाट सिकिस्त बिरामीहरु एम्बुलेन्स तथा हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि अस्पताल आइरहेको बताए ।
ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा ज्योतिन्द्र शर्माका अनुसार पनि साता–दश दिनको अवस्था हेर्दा फिभर क्लिनीक, वार्ड तथा इमरजेन्सीमा आउने बिरामी संख्या घटिरहेको छ । तर उनले पनि आईसीयू चाहिने बिरामीको संख्यामा भने खासै कमी नआएको बताए । डा. ज्योतिन्द्रले संक्रमण पिकमा पुगेको बेलामा व्यवस्थापन मिलाउन एकदम गाह्रो भएको बताउँदै हाल भने अस्पताल आउने बिरामीको चाप धान्नका लागि समस्या नरहेको जानकारी दिए । ९० जनासम्म भर्ना गरेर उपचार गरेको यस अस्पतालमा बिहीबार भने ४० जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् ।
संक्रमण उच्चतम विन्दुमा पुगेको समयमा ६० जना बढी कोरोना संक्रमित भर्ना गरेर उपचार गर्ने स्टार अस्पतालमा हाल सरदर २५ देखि ३० जनाको बिरामीहरु उपचाररत छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. शैल रुपाखेतीले पोजिटिभिटी रेट घट्दै गएकोले बिरामीको संख्या अस्पतालमा घट्दै गइरहेको सुनाए । ‘हाम्रोमा मात्र होइन होला अरुको पनि संख्या घट्दै गएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।